REPUBLICADAINIK | निर्वाचनसम्म गठबन्धन आवश्यक छ : डा.आरजु राणा, बालेन र रविप्रति नयाँ टिप्पणी - REPUBLICADAINIK
निर्वाचनसम्म गठबन्धन आवश्यक छ : डा.आरजु राणा, बालेन र रविप्रति नयाँ टिप्पणी
पोखरा । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा.आरजु राणाले निर्वाचनसम्म गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।
सोमबार पोखरामा नेपाल तरुण दलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डा.राणाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्म गठबन्धन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘ओलीले देश डुबाइ सकेका थिए ।’ संविधान र देश बचाउन ५ दलीय गठबन्धन गर्नुपरेको डा.राणाको भनाइ छ ।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको भोटले कांग्रेसले जितेको बताएकी छिन् । ‘भोट दिएका महिलाहरूलाई धन्यावाद’, उनले भनिन्, ‘महिला पार्टी सभापति हुन पाएका छैनौँ । महिला पनि सक्षम छन् । हिन्दु धर्ममा पनि महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । पुरुषले नसकेपछि महिलालाई देवीको विभिन्न अवतारमा पठाइएको छ ।’
उनले कम्युनिस्ट जस्तो तल्लो तहको राजनीति कांग्रेसबाट नहुने बताइन् । ‘कम्युनिस्टले नगरेको काम पनि मैले गरेको हुँ भन्छन् । हामी भलाद्मी हुन्छौँ ।’
उनले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौति रहेको पनि बताएकी छिन् । ‘हामीभन्दा भिन्न विचार राख्ने मानिसहरू पनि छन् । यो विषयलाई विचार गरेर राजनीति गर्नुपर्छ’, डा.राणाले भनिन् ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानको प्राबधानका कारण स्वतन्त्रले पनि उम्मेदवारी दिएर जित्न सकेको उनले बताएकी छिन् ।
‘जति पनि अहिले स्वतन्त्र उठेका उठेका छन् संविधानमा हामीले लेखेको आधारमा उठेको हो’, उनले भनिन्, ‘उनीहरूको प्रोफरमेन्स कस्तो हुन्छ ? त्यसमा पनि भरपर्छ ।’
बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेप्रति लक्षित गरेर कांग्रेस नेतृ डा.राणाले भनेकी छिन्, ‘एक्टर पनि एक्टिङ छोडेर पोलिटिक्स गर्ने, पत्रकार पनि पत्रकारिता छोडेर पोलिटिक्स गर्ने, जो पनि पोलिटिक्स गर्ने । हुन त राम्रो हो रमाइलो हुन्छ, होइन ? विभिन्न किसिमका मान्छेहरू विभिन्न विचार बोकेर आउँछन् ।’
नेतृ राणाले भनेकी छिन्, ‘आफ्नो गुण के हो पहिचान गर्नुस् । अहिले जति पनि स्वतन्त्र रुपमा जितेका छन् नि ? उनीहरूले एउटा–एउटा गुट पहिचान गरी नेता बनेको हो ।’
‘बालेन्द्र शाहको प्रचार हेर्नुभयो सोसल मिडिया ? रुटिन अफ नेपालबन्दलाई उहाँले कतिमा कन्सल्टेन्सीमा हायर गर्नुभयो ? त्यो नभएको भए बालेनको आवाज आउने थिएन । रुटिनअफ नेपालबन्दलाई परिचालन गर्‍यो’, डा.राणाले भनेकी छिन् ।
कोरोनाका बेला ओली सरकारले काम गर्न नसकेको बताएकी उनले कांग्रेसले त्यो बेला धेरै काम गरेको उल्लेख गरिन् ।
‘कोभिडको बेलामा ओली सरकारले सिन्का भाँचेन । जति काम नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो । त्यो बेलामा कांग्रेसले धेरै नेपालीको ज्यान बचायो । कांग्रेसले धेरैको घरमा खाना पुर्‍यो, अनाज वितरण गर्‍यो, शव जलाउने काम पनि गर्‍यो’, डा.राणाले भनेकी छिन् ।
उनले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार आएपछि दीर्घ रोगीहरूलाई ५–५ हजार दिने निर्णय गरेको बताएकी छिन् । ‘हामीले मसिनो गरेर वडा र गाउँको जनताको सेवा गर्‍यौँ भने स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्छ’, उनले भनिन्, ‘कैलालीका धेरै वडामा अहिले पनि असाय मानिसहरू एक्लै बस्ने गरेको छन् । वृद्ध भत्ता र दीर्घ रोगीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।’
उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले इमान्दारिताका साथ जनताको काम गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ठूलो च्यालेञ्ज छ । काम गर्न चुनौति छ’, उनले भनिन्, ‘कर्मचारी साथीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर काम गराउन आग्रह गर्नुपर्छ ।’
उनले भनेकी छिन्, ‘पालिकाको प्रमुखलाई धेरै ठूलो कामको चाप हुन्छ । हाम्रो पार्टीको तरुण र नेविसंघका भाईहरूलाई सहयोग माग्ने हो भने काम गर्ने तरिकामा सहज हुनेछ ।’
डा.राणाले प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवालाई उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म फुर्सद नहुने गरेको बताइन् ।
उनले भनेकी छिन्, ‘पदमा पुगेपछि धेरै गर्छु भन्ने लागेको हुन्छ तर, पूरा गर्न गाह्रो छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म फुर्सद नहुने गरेको मैले नजिकबाट देखेको छु ।’
प्रधानमन्त्री हुन सजिलो भए पनि काम गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री देउवा देशमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएको तर, जनचाहनाअनुसार काम गर्न गाह्रो भएको बताइन् ।
‘देशमा पैसाको अभाव छैन । धेरै पालिकामा बजेट फ्रिज भएका पनि छन् । तरुणसँग मिलेर जानुपर्छ’, उनले भनेकी छिन् ।
‘हामी सयको स्पिडमा काम गर्न सोँच्छौँ । कर्मचारीहरू दशको स्पिडमा हिँड्छन्’, उनले भनेकी छिन् ।
Published : Monday, 2022 June 20, 6:28 pm
खोरमा रहेका टोले गुण्डा ‘कुले’लाई छुटाउन तीर्थ लामाको ठूलो हर्कत, तनावमा प्रहरी
शेखर समूहको कांग्रेस कमजोर बनाउने हर्कत, भाग माग्न काठमाडौंमा सलबलाउन थाले
अदालतका बिचौलियाको १ नं. नाइकेलाई परिषदले कारबाही गर्ने, बानेश्वरमा भव्य मल
सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई एमालेले समितिमै रोक्यो, रावलले बखेडा झिके
बाघको डमरु नेविसंघलाई कमजोर नठान्ने एमालेको छाउरा अनेरास्ववियुलाई चेतावनी
तरुण दलका तीन जना पूर्व ‘शक्ति’ एकैठाउँ भेटिए